FAQs - Kingsine Electric Automation Co., Ltd.
Manokana amin'ny fizahana herinaratra sy fandrefesana herinaratra
Fametrahana fitsapana manan-tsaina
Kitapo fitsapana fampitaovana fiarovana
Meteran'ny herinaratra marobe
F: 1. Firy ny firenena nanondranan'i KINGSINE hatreto?
A: Ny vokatra marika KINGSINE dia nanompo tamim-pahombiazana ny mpanjifa nanerana firenena mihoatra ny 70 manerantany, anisany ny ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, GE sns.
F: 2. Inona no fotoana itarihana ny fandefasana?
A: Miankina amin'ny habetsahan'ny filaharana sy ny vanim-potoana hametrahanao ny filaminana. Matetika isika dia afaka mandefa ao anatin'ny 7-15 andro mandritra ny fotoana kely, ary manodidina ny 30 andro ho an'ny habetsaky ny be.
A: MOQ dia napetraka 1. Aza misalasala mifandraisa aminay amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
F: 4. Inona ny fomba fandefasana?
A: Azo alefa amin'ny rivotra na amin'ny alàlan'ny mpandefa hafatra mivantana (UPS, DHL, TNT, FEDEX, EMS, SF Express ary ect) na koa amin'ny ranomasina. Azafady mba jereo anay alohan'ny hametrahana baiko.
F: 5. Inona ny fe-potoana ekenao azo ekena?
A: T / T sy L / C eo imasony dia fehezan-dalàna ara-dalàna azo ekena.
Q ： 6.Marary ny fotoana fiantohana?
A：Manome antoka 3-taona izahay amin'ny fanamboarana maimaimpoana sy ny fikojakojana maharitra.
F: 7. Inona no tombony azonao?
A: KINGSINE dia niasa manokana tamin'ny fitsapana sy fandrefesana herinaratra nandritra ny 21 taona mahery. Hevitra famolavolana rehetra-iray-iray, enta-mavesatra be & famaritana avo lenta saingy misy fahombiazana avo lenta, antoka 3-taona fanamboarana maimaimpoana sy fikojakojana maharitra.
F: 8.Inona ny rindrambaiko ampiasain'ny vokatra?
A: KINGSINE marika Relay Test Sets dia asongadin'ny fiasa feno amin'ny filaharam-panjakana, ny Harmonika, ny fitsapana recloser, ny tsy fitoviana amin'ny elanelana, ny elanelana, ny fihoaram-pefy, ny zero, ny fanitsiana, ny fitarihana herinaratra, ny tahan'ny fahasamihafana, ny fihenan'ny harmonia, ny fampifanarahana, ny fahasamihafana amin'ny busbar, ny fitsapana matetika, Fitsapana Dv / Df, sns.
F: 9.Ny fampirantiana izay efa natrehinao taloha?
A: Isan-taona dia mandray anjara amin'ny fampiratiana 7-8 erak'izao tontolo izao ny KINGSINE, toa ny IEEE, Middle East Electricity, FIEE, Elecrama, Exporcentr, Hannover, Power-Gen, Utility isan-kerinandro sns.
Vokatra asongadina, Sitemap,
Fitsapana fampitana, Fitsapana fampitàna lavitra, Fiarovana Relay Tester, Fitsapana fampitana mivantana, Fitsapana fampitana niomerika, Fitsapana fampitàna an-tsokosoko, Vokatra rehetra